Mali - BBC News Somali
Khasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay Mali oo ka yar sidii horey la filayay
Dowladda Mali ayaa hoos u dhigtay tiradii ku dhimatay weerar ka dhacay bartamaha dalkaasi oo ay markii hore sheegtay in ay ku dhinteen dad ku dhaw.
Rag hubeysan oo 100 qof ku dilay dalka Mali
Wararka ka imanaya dalka Mali ayaa sheegaya ragga weerarka geystay ee 100-ka qof dilay iney xirnaayeen dharka ay dhaqan ahaan xirtaan dadka ugaadhsada ee deggan deegaanka Mopti.
Ninka hadda ugu taajirsan dunida wuxuu noqonayaa qof aan waxba heysan, marka la barbar dhigo boqorkan Muslimka ah
Mali: Tuareg lagu laayay weerrar 'aargoosi ah’ oo ay jihaadiyiin soo qaadeen
In ka badan 40 xubnood oo ka mid ah bulshada Tuareg ayaa waxaa lagu dilay laba weerrar oo kala duwan oo waqooyi bari ee dalka Mali ay ku soo qaadeen maleeshiyaad looga shakisan yahay inay Jihaadiyiin yihiin, sida ay saraakiishu sheegeen.
Askar Qaramada Midoobay ka tirsan oo Mali lagu dilay
Laba askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ayaa lagu dilay dalka Mali toban kalena waa lagu dhaawacay weerar lagu qaaday xeradooda.
Ciidamada Faransiiska oo sheegay in ay Mali ku dileen dagaalyahano IS
Militariga Faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in 30 ka tirsan kooxaha Jahaad doonka ay ku dileen Axaddii dalka Mali.
Hogaamiye Islaamiyiinta Mali ka tirsan oo maxkamad la hor geeyey
Hogaamiye jihaad aloos ah oo u dhashay dalka Mali ayaa markii ugu horraysay la hor geeyey Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee ICC, waxaana lagu eedeey dambiyo dagaal.